isiZulu Tug of Life Izinselelo zempilo - Life Talk & The Tug of Life Initiative
Eyabantu abasesigabeni sokuthomba nabadala bayo yonke iminyaka
Iyakuhlomisa ukuze ukwazi ukulawula impilo yakho
Iyakusiza ukuthi wazi okumele ukwenze
Igxile ekukhuliseni injabulo, impumelelo kanye nokugculiseka
Ikusiza ekufinyeleleni emiphumeleni oyifunayo empilweni
Uma ungena enkundleni yempilo, uhlele ukwenzani? Uyabukela, uyadonsa, uyacasha noma uyabaleka? Njengoba ‘izimbangi’ ezehlukene zidonsela ngasohlangothini ezilithekhile, izinqumo ziyamemeza ukuze uzinake. Uzoqinisa wonke ama-Galvaniser owatholayo noma uzovuma ukunqotshwa ama-Challengers?
I-Tug-of-Life ivusa izinkulumo-mpikiswano mayelana nezinqumo nemiphumela. Indlela yayo efuna imiphumela ithinta izinkinga ezithile ukuze zikusize ukwazi ukuba nempilo elula nejabulisayo. Le ncwadi ikhuluma ngezinto ezisuka esigabeni sokuthomba, ubudlelwano, umsebenzi, ezempilo, ukuba umzali, okukamoya, imvelo kanye nokukhula ube mdala; kuya ezinkingeni ezikuphatha kabi kakhulu ezifana nezidakamizwa, ukuphuza utshwala ngokweqile, ubugebengu, izindaba zothando, INGCULAZI kanye nengcindezi.
‘Inamandla, ixukuza umqondo, ishintsha impilo’
‘Iqukethe amatemu amasha’
‘Kumele ifundwe yinoma ubani oneminyaka eyi-10 kuya kweyi-100’
U-Izabella Gates ngumbhali wezincwadi zochungechunge lwe-Life Talk ezidayisa kakhulu nezihunyushwe emhlabeni jikelele. Ungowesifazane ongusomabhizinisi osimeme, isikhulumi esigqugquzelayo aphinde abe ngumqambi wesithangami sezingxoxo ngempilo i-Life Talk Forum. U-Izabella usebenza kakhulu nentsha kanti futhi ujwayele ukuvela komabonakude nokuzwakala emsakazweni.
UMbhishobhi oMkhulu wasEThekwini